Dawlada Federaalka Oo Dhamaystirtay Diyaargarowgii Doorashooyinka. - Cakaara News
Dawlada Federaalka Oo Dhamaystirtay Diyaargarowgii Doorashooyinka.
Jigjiga(CN) Jimce.Dec.26.2014, Dawlada dhexe ee Federaalka ayaa diyaarisay dhamaan habsami usocodkii nidaamyada doorashada 5aad ee sanadka 2007-da ee tirsiga dalka oo ku aadan bisha sagaalaad ee Ginbood.
Xafiiska xisbiga talada haya ee EPRDF ayaa tababar u qabanaya 1200 oo ay kamidyihiin masuuliyiinta EPRDF, dhamaan wasiirada heer federaal, madaxwaynaha DDSI iyo siddeeda madaxwayne ee deegaanada, iyo masuuliyiin badan. Tababarkan oo ay qabanayaan masuuliyiin sare oo uu kamidyahay r/wasaare kuxigeenka dalka ayaa waxaa kasoo qayb galaya 1200 oo ah saamiyada kasocda EPRDF ee Axmaarada, Oromada, Shucuubta Koonfureed iyo Tigreega.
Xisbiga Dimuqraadiga Shacbiga Soomaalida Itoobiya oo isaguna xushay xubnaha uga qayb galaya tababarkaasi ayaa waxaa uga qayb galaya 90 xubnood halka ay ururada kale uga qayb galayaan Canfarta 30 iyo kuwa kale oo ay 20 xubnood uga qayb galayaan. Tabarkan oo soconaya muddo 3 cisho ah oo lagu qabanayo magaalada Adhama ayaa bilaabanaya 28 bishan Dec. ilaa 30-ka bisha Dec.2014.
Tababarkan ayay ujeedadiisu tahay sidii ay doorasho dimuqraadiya u dhici lahayd islamarkaana uu xisbigu ugu guulaysan lahaa doorashan 5aad ee soo maraysa guud ahaanba dalka. Xisbiyadan talada haya ayaa ah kuwo taageero iyo kalsooni badan kaqaba shacabka islamarkaana ah kuwo garaad iyo cilmi dheeri ah u leh hanaanka habsami u socod ee doorashooyinka dalka.